रेखाको आलोचना, शिव भन्छन ‘देशको नक्सा भएको केक काट्दा नकारात्मक सन्देश नहुने’ | रेखाको आलोचना, शिव भन्छन ‘देशको नक्सा भएको केक काट्दा नकारात्मक सन्देश नहुने’ – हिपमत
रेखाको आलोचना, शिव भन्छन ‘देशको नक्सा भएको केक काट्दा नकारात्मक सन्देश नहुने’
यतिबेला सम्माननिय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिवाद र आलोचनाको घेराबन्दि मा परेका छन । उनको जन्मदिनमा भएका गतिबिधिलाई लिएर सामाजिक संजालमा बिवाद उत्पन्न भएको हो । जसमा नेपालि कलाकारहरुले पनि आफ्नो धारणा व्यक्त गरिरहेका छन । यस्तैमा गायक शिव परियारले आफ्नो फेसबुकमा एक पोस्ट गर्दै यस्तो कार्यले नकारात्मक सन्देश नदिने लेखेका छन । हेर्नुस उनको पोस्ट जस्ताको त्यस्तै ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रि ज्यु जन्मदिनको हार्दिक मंगलमय शुभकामना! हजुरले यो केक काटिरहेको यो फोटो हेर्दा साह्रै चित्त…
Posted by Shiva Pariyar on Sunday, February 23, 2020
“सम्माननीय प्रधानमन्त्रि ज्यु जन्मदिनको हार्दिक मंगलमय शुभकामना! हजुरले यो केक काटिरहेको यो फोटो हेर्दा साह्रै चित्त दुखेको थियो ! तर यसरि आफ्नो देशको झन्डा ,नक्सा राखेर केक काट्ने प्रचलन अन्य देशमा पनि रहेको र यो कुनै नकारात्मक संदेश दिने खनालको नरहेको बुझेपछि तपाईप्रति अझ्झ सम्मान बढेर आएको छ ,तर मलाई लाग्छ म जस्तै आम नेपालीमाझ यो प्रचलन प्रति नकारात्मक सोचाई हुन सक्छ यस बिषय प्रति सम्माननीय प्रधान मन्त्रि ज्यु को ध्यान आकृष्ट हुन सकोस ,जनतामा नकारात्मक संदेश नफैलियोस भनि कामना गर्दछु ! खैर यो बिषय प्रतिको मेरो बुझाई गलत रहेको मनन गर्दै ,सफल कार्यकालको शुभकामना सहित जन्मदिनको हार्दिक मंगलमय शुभकामना ब्यक्त गर्दछु !” उनले अन्य देशमा पनि देशको झण्डा र नक्सालाई केक बनाएर काटिने प्रचलन रहेको बुझ्दा प्रधानमन्त्री प्रति अझै सम्मान गरेकोे कुरा व्यक्त गरेका छन । प्रधानमन्त्रीले हेलिकप्टरमा केक ढुवानि गरेकोे सँगै सार्बजनिज बिदा दिएको र केकमा ठूलो नेपालको नक्सा बनाईएको प्रति नेपालिहरुले सामाजिक सन्जालमा ओलिको चर्काे आलोचना गरेका हुन् ।
नियतवस नहोला तर लक्षण गतिलो छैन । छातीमा देशको जिम्मेवारीको बिल्ला र हातले देशको नक्सा काटेको देख्दा अचम्म लाग्यो । देशको प्रधानमन्त्रिको अनुहारमा पनि सन्देश हुन्छ, तर यो केक काटाइको सन्देश बुझिएन ।
Posted by Rekha Thapa on Sunday, February 23, 2020
यता आम नेपालिहरुले आलोचना गरेरहेको परिवेशमा नायिका रेखा थापाले भने आम नेपालिहरुको समर्थन गर्दै आलोचना गरेकी छन । उनले आफ्नो फेसबुकमा “नियतबस नहोला, लक्षण गतिलो छैन । छातिमा देशको जिम्मेवारीको बिल्ला र हातले देशको नक्सा काटेको देख्दा अचम्म लाग्यो । देशको प्रधानमन्त्रीको अनुहारमा पनि सन्देश हुन्छ, तर यो केक कटाईको सन्देश बुझिएन ।” भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेकी छन ।